ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပတ်သတ်သော အမေးအဖြေများ | Yangon Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Yangon - Yangon Directory | Yangon Yellow Pages
ယခုအချိန်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးက စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ဖြေကြားထားသည့် အမေးအဖြေများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
COVID ကာကွယ်ဆေးမှာ ဘယ်အချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တာပါလဲ?
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးသော လူများအနက်မှ အနည်းဆုံး (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းမှ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကာကွယ်မှု ရရှိခြင်း၊ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးလျှင် ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မရှိခြင်း နှင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ခုခံအားရရှိခြင်း စသည့်အချက်များဖြင့် ပြည့်စုံရပါမည်။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးသည် လူတိုင်းထိုးရန် လိုအပ်ပါသလား?
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးသည် မိမိဆန္ဒအလျောက်ထိုးရမည့် ဆေးဖြစ်သည်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ဆုံးဖြတ်ထားပါက သတ်မှတ်အကြိမ်အရေအတွက် ပြည့်မှီရန်ထိုးနှံ ရမည်ဖြစ်သည်။
COVID-19 ရောဂါခံစားနေရသူများနှင့် သံသယရှိသူများသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်
COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေသူများနှင့် သံသယရှိသူများသည် ရောဂါလက္ခဏာများ ပျောက်ကင်းပြီး (၁၄)ရက်အကြာမှသာ ကာကွယ်ဆေးထိုးရမည် ဖြစ်သည်။
COVID-19 ထိုးပြီးတာနှင့် ချက်ချင်း ရောဂါကာကွယ်နိုင်ပါသလား??
ကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ပြည့်အောင် ထိုးနှံပြီးသည်နှင့် ခန္တာကိုယ်မှ ကိုယ်ခံအားထွက်ရှိနိုင်ရန် အချိန်(၂)ပတ်ခန့် ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသော်လည်း ကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် နှားခေါင်းစည်းများတပ်ဆင်ခြင်း၊လက်ကို စက္ကန့်(၂၀)ခန့် ဆေးကြောခြင်းများကို မပျက်မကွက် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဆီးချို၊သွေးတိုး၊ကင်ဆာ စသည့်ရောဂါရှိသူများအနေနဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနိုင်ပါသလား??
ဤကဲ့သို့ ရောဂါအခံရှိသူများသည် အသက်အန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်ရသောကြောင့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့်သူများဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်သူတွေက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို မထိုးသင့်ဘူးလဲ?
COVID-19 အတည်ပြုလူနာများ၊သံသယလူနာများနှင့် ပျောက်ကင်းပြီး (၁၄)ရက်
မကျော်သေးသူများ ၊နို့တိုက်မိခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များနှင့် ၊အသက်(၁၈)နှစ်အောက် အုပ်စုတို့သည် ကာကွယ်ဆေးမထိုးသင့်ပါ။
ထိုးနှံရမည့် ကာကွယ်ဆေး အမျိုးအစားပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိုးနှံရမည့် COVID Shield ကာကွယ်ဆေးမှာ (၂) ကြိမ်ထိုးရမည် ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ပထမအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီး (၄)ပတ်အကြာတွင် နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံထိုးနှံရမည်ဖြစ်သည်။
ပထမအကြိမ်နှင့် မတူညီသော ကာကွယ်ဆေးကို ဒုတိယအကြိမ် ထိုးလို့ရပါသလား??
ယခုအချိန်ထိ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ အခြားဆေးကို ထိုးနှံ၍မရပါ။တူညီသော ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးမှသာ ထိရောက်သော ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို လုံလောက်စွာရရှိမည်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်- COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများသည် အချိန်တိုဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ဆေးများဖြစ်သောကြောင့် ယခုအချိန်ထိ သိရှိသမျှအချက်အလက်များသည် ပြောင်းလဲမှုများ ရှိလာနိုင်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက် အသစ်များရရှိလာပါက ထပ်မံဖော်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။